Xiyyaaronni Waraana Indiyaa daangaa Paakistaan qaxxaamuruun haleellaa kan raawwatan tahuu gabaafame - NuuralHudaa
Xiyyaaronni Waraana Indiyaa daangaa Paakistaan qaxxaamuruun haleellaa kan raawwatan tahuu gabaafame
On Feb 26, 2019 2
Torbee dabre kutaa Kaashimiir keessatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin loltoonni Indiyaa 42 eega ajjeefamanii booda, hariiroon Paakistaan fi Indiyaa hammaataa dhufuun, walitti gaarrifannaa waraanaa irra gahuu gabaasuu keenna ni yaadatama. Haaluma kanaan Kiibxata har’aa xiyyaaronni waraana Indiyaa daangaa qilleensa Paakistaan qaxxaamuruun halleellaa kan raawwatan tahuu gabaafame.
Waajjirri ministeera haajaa alaa Indiyaa ibsa baaseen, xiyyaaronni waraana biyyattii daangaa Paakistaan cehuun kaampilee hidhattootaa irratti haleellaa raawwatuu beeksise. Indiyaan akka jettutti dulli kun sochii hidhattootaa xiinxalluuf qofa kan geggeeffame tahus, kaampii leenjii hidhattootaa barbadeessuun hidhattoota heddu ajjeesuu himte
Dubbii himaan waraana Paakistaan Jeneraal Asiif Ghafuur ammoo ibsa kenneen akka jedhetti, “Xiyyaaronni Indiyaa gara daangaa biyya keennaa seenanii turan, raadaarii Paakistaan keessa seenuu eega hubatanii booda, muddamaan boombiiwwan fe’atan bosona keessatti harcaasuun baqatanii jiru” jedhe.
Walitti gaarrifannaan biyyoota humna Niwukilarii hidhatan lamaanii gara duula waraanaatti ce’e kun, naannicha saffisaan guutumatti lola hamaa keessa galchaa kan jiru tahuu odeeyfannoon arganne ni mul’isa.
May 19, 2022 sa;aa 5:24 pm Update tahe